Ogaden News Agency (ONA) – Weeraradii ugu dambeeyay ay qaadeen CWXO iyo shacabka xoola dhaqatada ah oo diiday canshuurtii Gibirka
Weeraradii ugu dambeeyay ay qaadeen CWXO iyo shacabka xoola dhaqatada ah oo diiday canshuurtii Gibirka
Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa na soo gaadhsiiyay warbixintii dagaalo ka dhacay wadanka Ogaadeeniya gaar ahaan deegaano ka tiran Garbo ku waasi oo lagu dilay tiro kamid ah Askarta mooraalka jabasan ee gumaysiga Ethiopia. Sidoo kale waxay wararka sheegayaan inay shacabka ka gadoodsan yihiin inay bixiyaan canshuurta Gibirka oo gumaysiga uu doonayo inuu dib u bilaabo.
Waxaan ogsoonahay inay boqortooyadii Xayle Salaase amartay hadda ka hor in laga qaado shacabka Ogadenya waxan loo yaqaano Gibir, taasoo ay diideen kana dagaalameen shacabka ilaa la joojiyay isku daygii noocaa ahaa. Canshuurtan loo yaqaano Gibirka waxay salka ku haysaa dhaqan gumaysi oo soo jireen ah oo macnaheedu yahay in shacabka la ogolaysiiyo inay bixiyaan hantida dawladda ay ku bixinayso iska caabinta gobanimadoonka.
Dagaalada iyo diidmadii Gibirka ayaa waxay u dhaceen sidan;
10/03/2013 Dagaal xoogan oo ka dhacay Deegaanka lagu magacaabo Badhi-waynaley oo Garbo katirsan ayaa waxaa wayaanaha lagaga dily 8 Askari waxaana lagaga dhaawacay 7.
10/03/2013 Karin-xodayle oo Garbo u dhow dagal isna ka dhacay waxaa Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 1 Askari waxaana lagaga dhaawcay 2 kale.
12/03/2013 Malayko oo Garbo u dhow waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 1 Askari.
Dhanka kale dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqan Ogaadeeniya ayaa sicad uga horyimid canshuurta loo yaqaano Gibirka oo gumaysiga uu ku soo rogey dadka iyo duunyada. Shacabka Ogaadeeniya oo awalba la daalaa dhacayey cunaqabataynta gumaysigu ku soo rogay Ogaadeeniya sanadkii 2007dii ayaa siwayn uga horyimid boobka lagu soo qaaday dadka, ganacsiga iyo duunyada Ogaadeeniya.
15/03/2013 dabaqoodhiga hawaarinta iyo Askarta gumaysiga Ethiopia oo is garabsanaya ayaa weerar ku soo qaaday xoola dhaqato ku sugnayd deegaanka ku hareeraysan magaalada Garbo si ay uga qaadaan Canshuurta (Gibirka) boobka ah ee lagu xalaalaystay xoolaha dadka rayid ah.
Xoola dhaqatada deegaanka ayaa diidmo iyo is-difaacid ka la horyimid wayaanaha waxa ayna Askarta gumaysiga Ethiopia rasaas ku fureen xoola dhaqatadii iyo xoolahoodii, halkaas oo ay sida loo xaqiijiyey wakaalada wararka Ogaadeeniya (ONA) ay ku dhinteen 3 Neef oo Lo’ ah halka ay ku dhaawacmeen rasaastaasi 2 Neef oo kale oo Lo’ ah.
Dhacdooyinka noocan oo kale ah ee ay shacabku ku difaacayaan xoolahooda kuna diideen in laga qaado canshuurta lagu boobayo hantidooda ayaa waxa ay ka dhaceen Deenada kala ah Dalaad, Dhuurre iyo Ceel-xaar oo dhammaantood kawada tirsan Gobolka Qoraxay.
Shacabka Ogaadeeniya oo ah shacab geesi ah ayaa ka dhiidhiya ficilada guracan ee dulmiga ah ee uu gumaysigu kula kaco bulshada.